Dowladda Soomaaliya oo u jawaabtay Imaaraadka Carabta. – Hornafrik Media Network
Dowladda Soomaaliya oo u jawaabtay Imaaraadka Carabta.
Hornafrik-Dowladda Soomaaliya ayaa si kulula uga jawaabtay cambaarayn uga timid wadanka Imaaraadka Carabta taasoo la xiriritay lacagtii ciidamada amnigu ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee Muqdishu maalintii Axaddii aynu ka soo gudubnay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay tallaabada ay qaadday waxayna sheegtay in safiirka imaaraadka ee Muqdishu uu diiday in boorsooyinkaas la mariyo qalabka baaritaanka iyaga oo aan la furin.
Sarkaal u hadlay Soomaaliya waxa uu sheegay in in boorsooyin aan ahayn kuwo diplomaasiyeed in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeed waxay laalaysaa xasaanaddii ay cahdiga Vienna ee xiriirka diplomaasiyadeed. Waxaa kale oo uu sarkaalkaasi uu sheegay in is-agaradka ay gaadheen Soomaaliya iyo imaaraadka uu waqtigiisii dhammaaday sannadkii 2016-ka.
Madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan ku wajahn Sacuudi Carabiya.